I-24 Thigh Tattoos I-Ideal Design for Women-Tattoos Art Ideas
I-24 Thigh Tattoos I-Ideal Design for Women
Amathambo amakhulu amathanga ayenziwa ngabaqeqeshi abaqeqeshwe ukuqinisekisa ukuba unesicwangciso esihle kakhulu. Ukuba unenkxalabo ngabantu abafumana amathambo kwiindawo ezingathandekiyo emathangeni abo, ngoko kufuneka uqaphele nge-parlor oya kuyo.
1. Iingcamango eziphezulu zeeLadies
Indlovu # i-ink ink inkcazo ibe enye yezinto ezizithandayo zamantombazana abathanda iilwanyana zasendle. Ukudibanisa kunye noyilo lwangaphandle yinto eyenza ibonakale ipholile kakhulu kwesikhumba. Umbala wesikhumba somfazi awuchaphazeli ubuhle beenkino.
2. Intambo yeHama yamahhashi Inkqonkqo yabesifazane
Ihashe elihamba kunye neendlovu ziyakubonakala zihle kumlenze wenkosikazi. Ukujonga okuxhomekeke kwinqanaba lehashe kunokunceda inkosikazi iphumelele ekuthangeni xa ihamba kunye neentyantyambo.
3. I-Skull Thigh Tattoo ingcinga yamantombazana
Amantombazana angathanda ukongeza ubomi kwiinki zeenkrele zabo emathangeni abo xa bongeza iintyatyambo kuwo. Umbala obomnyama weentyatyambo unika ikhanda ibonakale ebonakalayo.
4. Inqaku lebhola lebhola lebhola lebhola lebhola le-tattoo labesifazane
Iibhitrifisi zizidalwa ezihle kwaye xa zikhonkcekile kwesikhumba samantombazana, imibala esetyenziselwa ukungena iflyflyfly kunye namaqabunga azungeze yinto eyenza ukuba i-tattoos yebandlovu yebhathane ibumangalise.
5. Iintaka kunye ne-Flower Thigh Tattoo imbono yabasetyhini
Intaka ebomvu kunye nemibala yeentyatyambo ezininzi kunye neentaka ezimibalabala yinto eyenza ithanga libukeka lihle kwaye liyikeka kwesikhumba senkosikazi.
6. Ukugqithisa ingonyama ye-lion tattoo ink inkcazo yamantombazana
Amantombazana angasebenzisa inkunzi yengonyama ukumkani #tattoo kwipenisi njengomdwebo ukuba nabani na abayibona bayakufuna ukuyinki. Le ngcamango ingasetyenziswa ngokwezifiso zeentombi.
7. Iintaka zeenyoni ziyilo lobunzima kwintambo
Ukuzinya kweentaka inkqayi inkcazo kwinqaba kunokutshintsha ukubonakala kwethanga lomfazi. Umbala weentaka kunye ne-perching emithini yenza ithanga libukeke liphile kwaye lipholile.
8. I-tattoo design tattoo kwintambo
Ukuqulunqwa kwesi sidima kwinqama kunokufezekiswa kuphela ngumculi we-tattoo onokuzisela ubugcisa bakho endaweni enye, umlenze.
9. I-anchor enemibala kunye noRose Thigh Tattoo inkcazo yeenkwenkwezi zamantombazana
I-Anchor kwaye iphakanyiswe ingcamango yentshontsho yentsanga ingasetyenziselwa kakuhle ukunceda intombazana efuna ukudlulisa ulwazi kwihlabathi xa ityala layo libonakala.
10. Iintlobo ezintathu zeentyatyambo zentyatyambo ezilula ze-tattoo eziya kubafazi
Iimpawu zentathu zentyatyambo zithandeka kwaye zilula ukwenza izinto ezingafaniyo namathambo amaninzi asebenzisa iimibala emininzi.
11. Ientyatyambo ezinombala kunye nomkhonto wethambo lomnyama
Ubumnyama bengonyama kunye nombala weentyatyambo zenza intambo yesibini ibe yinto enobungqina benkalipho yokuba ingonyama iyadlula.
12. Umkhosi waseJapan umkhonto wesikhumba somnxeba we-tattoo design ink inkcazo yamantombazana
Unokubonakala uhlukile njengendodakazi ene tattoo yeJapan eyenza ukuba umntu eme ngaphandle kwesihlwele ngaphandle kokwenza umsindo.
13. Ummangaliso we-peacock thigh design idea malunga namantombazana
I tattoo yethanga yenkobe inokumelwa ngokusemandleni kwintambo yowesifazane oxabisa izinto ezilungileyo zobomi.
14. I-Owl yaseNtshonalanga Inking Idea
Umbala wegama elikwinqanaba le-owl lingabhalwa ngokubhaliweyo ngumnini weloyilo. Le ngenye yezona tattoos ezigqibeleleyo ongayisebenzisa njengendodakazi.
15. I-Rose tattoo design kwintambo ephezulu
I-tattoo ethangeni lesangqa liye labizwa ngokugqithiseleyo nombala obomvu phakathi kwezinye ientyatyambo ezihlala zihle kuma-ladies.
16. Idizayini enombala ombala kunye nomnyama kumathanga
Ingcamango yalolu hlobo olubalaseleyo lwemibala # ekhondweni kukuqinisekisa ukuba uhlukile kwabanye. Iindlela iindlela imibala ezixutywe ngayo ziyamangalisa.
17. Intlanzi yintombazana yenyoka yomnatha we-tattoo design ink inkcazo
Fumana intwanyana encinci ngentambo yentombazana yentombazana ye-tattoo #idea eyoyikrakra ize ihlalise ngexesha elifanayo.
18. Intombazana yamathambo emangalisayo
Uyilo lo tattoo lwentambo alunakunyaniseki kwaye alufanele luyinkimbinkimbi. Amantombazana abasebenzisa le ngcamango ye tattoo ayisoloko ehlakaniphile abafazi.
19. Lion Face tattoo inkinobho umzobo ngcamango
Ingonyama ibhekane nomdwebo we-tattoo ingcamango eyabonakala kwinqaba labesifazane ibonisa amandla omfazi ongenakwenza ukuthetha naye.
20. Iphupha lokubamba umlenze womgca we-tattoo ingcamango yamantombazana
I-Dream catcher tattoo yimbono ongayenza emathangeni akho ukuba ulungele ukungena ngexesha lokuqala.
21. I-Peacock intambo ye-tattoo ink ink inkcazelo yabesifazane
Iigonyi ziintaka ezinkulu kwaye zihle kakhulu. Ukusetyenziswa kweentlanzi ze-peacock esikhumbeni kubonisa nje ukuba uyabuxabisa ubomi kunye nobuhle.
22. Umlenze ophezulu we-tattoo design design ngombala
Umlenze ongceni weengxowa yeengxowa yesohlwayo yinto eyoyikisayo yombono ngamnye umntu angathanda ukuyisebenzisa.
23. I-Bird, Flower kunye nokuthumela i-timer inkinobho yokwakheka kwintambo emthangeni
Inhlanganisela efana nale ithetha into enye into yokuba umgcini owaziyo uyakwazi ukuvelisa okulungileyo kumntu wonke wokusetyenziswa.
24. I-tattoo design design kwintambo yentombazana
iimpawu zezodiac zempawuutywala tattooi tattooiifatyambo zeentyatyamboIndlovu yeendlovuiidotitattoostattoos zohlangabathanda i tattoostatto tattoostattoos zelangai-cherry ityatyamboTattoos zeJometritattoos ezinyawozinyonitattoo yedayimaningesandlatattoos kubantuiifotto zentamoi-tattoosizigulanetattoo engapheliyotatto flower flowerizithunywa zezuludesign mehndisibinitattooiifoto eziphakamileyoI-Ankle Tattooscute tattoostattoo yamehlotattoostattoostattooowona mhlobo womhloboukutshiza amathamboicompass tattooihoi fish tattootattoostattoos kumantombazanatattoos zenyangatattoIintliziyo zeTattoosizifuba zesifubaiipattoosIintyatyambo zeTattoozomculo tattooszengalo zengalotatna tattoongombono